Nisy ihany koa ny fanehoana an-tsary ny mombamomba io vondrona io: ireo firenena mpikambana ao aminy, ireo tompon’andraikitra efa nitondra tao. Nanamafy hatrany ny ambasadaoro sady filohan’ny delegasion’ny Vondrona Eoropeanina, Giovanni Di Girolamo fa saika miompana amin’ny ady amin’ny fahantrana eto Madagasikara avokoa ny famatsiam-bola ataon’izy ireo. Tsiahivina ihany koa fa izy ireo no mamatsy vola betsaka indrindra amin’ireo mpamatsy vola miara-miasa amin’i Madagasikara. Efa mandroso tsikelikely i Madagasikara hoy i Giovanni Di Girolamo ary tanjona ny hanatsarana hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny ankapobeny, indrindra ny lafiny ara-toekarena. Manoloana izao fifidianana solombavambahoaka ho avy izao dia mitaky ny fangaraharana ny vondrona eoropeanina ary nilaza hanara-maso akaiky ny fizotrany mba ho eken’ny rehetra ny vokatra hivoaka eo tsy hiverimberenan’ny krizy politika intsony. Mitohy ihany koa ny fiaraha-miasa ka hisy hatrany ny famatsiam-bola ny amin’ny sehatra fahasalamana sy ny angovo, indrindra ny fanatsarana sy ny fanamboaran-dalana. Tetsy an-daniny, nilaza kosa ny minisitry ny fanajariana ny tany, Hajo Andrianainarivelo fa ilaina ny fampisehoan’ny governemanta ny fahavononana amin’ny lafiny rehetra ary anjarany ny mifampiraharaha tsara mba hitombo hatrany ny famatsiam-bola azo. Nanambara ihany koa ny tenany fa tokony hisy vokatra mazava amin’ny vahoaka Malagasy ny vola rehetra azo satria ireo mpamatsy vola rehetra ireo dia miezaka mijery ny tombony ho azy ihany koa. Araka izany dia samy tokony hahazo tombony ny roa tonta amin’ny fifanaraham-piaraha-miasa rehetra hatao, hoy hatrany ny minisitra.